​राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न देउवाकाे दबाब, गृहमन्त्रीको सुराकी भत्ता पचाउँदै भानु ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको अर्थतन्त्र र सिष्टमलाई खोक्रो बनाउने र पार्टीका नेता तथा आफ्ना आसेपासेलाई धनी बनाउने खेल जारी राखेका छन् । सत्ता बुझाउने बेला जभाभावी निर्णय गरेका उनले राज्यका हरेक अंगहरुलाई अपांग बनाउने खेल जारी राखेका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न देउवाले दबाब दिइरहेका छन् । देउवाका पीए भानु देउवाले त्यससम्बन्धी फाइल आफैं बोकेर कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले लोकसेवा आयोग पुग्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सत्ता छाड्ने बेलामा उनले ६० जना कार्यकर्ता गुप्तचरमा भर्ना गर्न खोजेका छन् । त्यसका लागि पीए देउवाले लाखौं रुपैयाँ उठाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा लोकसेवा आयोगको सहमति बेगर भर्ना लिन पाइँदैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले यस्ता भर्नाहरु रोक्दै आएको छ । यसअघि शक्ति बस्नेत र विमलेन्द्र निधिले पनि गुप्तचरमा कार्यकर्ता भर्नाका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । तर, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफूले कुनै पनि हालतमा संविधानविपरीत निर्णय नगर्ने भन्दै त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे ।
अहिले फेरि मैनालीलाई देउवाका पीएहरुले भर्नामा सहमतिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर, मैनालीले मानेका छैनन् ।
गुप्तचरमा रिक्तमध्ये १० प्रतिशत छड्के भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिलाई विभागमा भर्ना गरेर ती क्षेत्रका गोप्य सूचनाहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले छड्के भर्नाको प्रावधान राखिएको थियो । तर, उद्देश्यभन्दा विपरीत त्यसमा गृह मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि पैसा उठाएर प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरु गुप्तचरमा भर्नाको चलखेलमा लागेका छन् । गृह मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेकाले उनका पीएहरुले यस्तो चलखेल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका पीएहरुले नै गृह मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका पिए भानुले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारोबारहरु हेर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी भत्ता पनि उनले नै बुझ्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरणसम्मले नै टेर्दैन अख्तियारलाई, मनपरितन्त्र !
१७,माघ.२०७४,बुधबार १३:०० मा प्रकाशित
← प्रधानन्यायाधीशको नागरिकताको प्रतिलिपि माग्दै डा. केसी पुगे सिडिओ कार्यालय
अचानक उडान रद्द गर्ने बुद्द एयरको मनपरी, यस्ताे छ बिरोध बढेपछि निकालिएयो विज्ञप्ति ! →